Xog: Imaaraadka Carabta oo baabuur dagaal kasoo dejiyey garoonka Boosaaso - Caasimada Online
Home Warar Xog: Imaaraadka Carabta oo baabuur dagaal kasoo dejiyey garoonka Boosaaso
Xog: Imaaraadka Carabta oo baabuur dagaal kasoo dejiyey garoonka Boosaaso
Boosaaso (Caasimada Online) – Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa Puntland ugu deeqday gadaadiid kuwa dagaalka ah, oo toddobaadkan laga soo dejiyey magaalada Boosaaso, sida ay ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen Caasimada Online.
Gadaadiidkan dagaal ayaa gaaraya illaa 30, waxaana la sheegay inay yihiin nooca Cabdi Bile-ha ay Soomaalida u taqaan ee lagu rakibo hubka culus, sida ay aan xogta ku helnay.
Maamulka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayaa xoojinaya awoodda ciidamada Puntland, xilli laga cabsi qabo in haddii Farmaajo ay u meel-marto labada sano ee muddo kororsiga ah uu dagaal ku qaado Puntland. Xildhibaan ka tirsan baarlamanka federaalka oo taabacsan Farmaajo ayaa horey ugu hanjabay inay qabsanayaan Puntland.
Qatar iyo Imaaraadka Carabta ayaa waxaa ka dhaxeeya loolan siyaasadeed oo ka socda, ayaga oo kala taageeraya dowladda dhexe iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada.
Qatar ayaa hadda ah dowladda bixineysa lacagta uu Farmaajo u adeegsanayo muddo kororsiga, taasi oo laaluush ahaan loo siiyo, guddoonka golaha shacabka xildhibaanada iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka, ee laga cabsida qabo inay kasoo horjeestaan muddo kororsiga, si loogu aamusiyo.
Qatar waxaa taas usii dheer in lagu eedeeyo inay xiriir iyo wada-shaqeyn la leedahay kooxaha argagixisada Soomaaliya, kaalina ka qaadato qaar ka mid ah falalka argagixiso, sida lagu sheegay warbixin uu bishii July 2019 daabacay wargeyska caanka ah ee Mareykanka ee New York Times.
Qatar waa ay beenisay eedeymahaas.